Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ndị nọọsụ Ontario: Nchegbu n'ili na atụmatụ ịmalitegharị ọhụrụ
Gọọmentị Ontario na-akpachara anya na ifufe ma na-etinye n'ihe egwu ọganihu mpaghara ahụ mere na idobe mgbasa nke COVID-19 nje.
Otu ndị nọọsụ edebanyere aha nke Ontario (RNAO) na-ekwu na ikike mpaghara ịchịkwa mgbasa nke ọrịa ka anyị na-abanye na ọnwa oyi ka a na-agba chaa chaa site na atụmatụ mmeghe nke na-ebuli oke ikike dị ka Mọnde, Ọkt. 25, wee wepụ ya. usoro ahụike ọha - gụnyere ịchọ ihe akaebe ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa - na mbido Jenụwarị.
RNAO na-enwekwa nchegbu nke ukwuu gọọmentị ahọrọghị ịkpọsa ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa maka ndị ọrụ ahụike niile na mpaghara na ntọala niile. Ntuziaka a adịlarị maka ndị na-arụ ọrụ na nlekọta ogologo oge, na njedebe iji rube isi na Nov. 15. Ọtụtụ ụlọ ọgwụ na-ahụ maka nlekọta ahụike na-eme otu ihe ahụ. Agbanyeghị, ụzọ patchwork a maka amụma gọọmentị Ford na-ahapụ ndị ọrịa na ndị ọrụ n'ọtụtụ ụlọ ọgwụ, nlekọta ụlọ na ntọala obodo ndị ọzọ n'ọkwa dị elu karịa ma ọ bụrụ na ndị ọrụ na-enweghị ịgba ọgwụ mgbochi na-ahapụ otu ntọala maka onye ọzọ nwere ihe dị nro karịa.
Ịchọ ka ndị ọrụ nlekọta ahụike na agụmakwụkwọ gbakee nke ọma bụ amụma dabere na ihe akaebe, nke RNAO kpọrọ ya na Julaị 2021, nke Tebụlụ Sayensị nke gọọmentị kwadoro na nso nso a. Ileghara ndụmọdụ dị otú ahụ anya na-emegide ezi uche, ọ bụ enweghị ọrụ ma mebie nlekọta ndị ọrịa na nchekwa ndị ọrụ.
RNAO na-agba ndị mmadụ ume ka ha gaa n'ihu na-abanye aka na Alert Action ya na-achọ Premier Ford ịgbatị ndị ọrụ nlekọta ahụike na agụmakwụkwọ ọgwụ mgbochi ma guzobe mpaghara nchekwa n'akụkụ ebe ọrụ ha. Ndị otu ahụ na-arụ ụka na ndị a bụ usoro dị mkpa achọrọ iji buso COVID-19 ihu.